EPL: Kooxda Arsenal oo guul ka gaaray Swansea City, iyadoo kaarka cas laga qaatay… + SAWIRRO – Gool FM
(London) 15 Okt 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guul ciriir ah ka gaartay Swansea City oo marti u ahayd, waxaana ay kaga adkaatay 3-2, iyadoo Gunners kaarka cas laga qaatay oo ku ciyaaraysay 10 ciyaaryahan.
Goolka hore waxaa kooxda Gunners u dhaliyey 27’daqiiqo Theo Walcott, goolkaas oo ahaa mid uu ka cariirsaday difaacyada Swansea City.
Theo Walcott ayaa markale shabaqa soo taabtay kulankan inta aan la aadin qeybta nasashada waxaana gees laad ama koorno la soo qaaday uu inta ku dhex koontoroolay xerada ganaaxa Swansea shabaqa ku tolay 33’daqiiqo.
Kooxda Swansea City ayaa hal gool iska soo guday waxaana kubad uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa meel sare ka galiyey shabaqa Gunners 38’daqiiqo Gylfi Sigurdsson, kaasoo kulanka ka dhigay 2-1 ay ku gacan sarreeyeen wiilasha Arsenal, sidaas ayaana lagu kala nastay qeybta hore.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay kooxda marti loo ahaa ee Arsenal waxaana u dhaliyey 57’daqiiqo Mesut Ozil markii kubad dhul ma dhacdo ah shabaqa meel sare ka galiyey, kaddib karoos wacan oo uu ka helay Alexis Sanchez.
Markale Swansea City ayaa gool kale la timid waxaana 66’daqiiqo shabaqa dhigay Borja Baston, kaddib markii uu baas hagaagsan ka helay Modou Barrow, kulanka ayaana sidaas ku noqday 3-2 oo wali ay hoggaanka ku haysay Arsenal.
Tababare Arsene Wenger kooxdiisa ayaa dhabar jab la kulantay kaddib markii uu kaarka cas oo toos ah ka qaatay kulankan Granit Xhaka daqiiqaddii 70-aad, kaddib markii uu dhulka dhigay caawiyaha goolkii labaad ee Swansea Modou Barrow.
Theo Walcott ayaa ku dhowaaday inuu saddexleydiisa kulankan dhammaystiro laakiin kubabadda ayuu labo jeer birta ku dhiftay oo uma suurto gelin, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-2 ay guul ku qaateen Arsenal oo ku ciyaarayay 10 ciyaaryahan.
Memphis Depay oo looga gacan haatinayo horyaalka Jarmalka (Kooxdee doonaysa?)